Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka UK » Maaskaro qasab ah oo ku soo noqonaya London Underground
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Safarka Tareenka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wararka kala duwan
Haddii la hirgeliyo, isbeddellada uu soo jeediyay Duqa Magaalada Khan ayaa si wax ku ool ah ugu celin doonta xaaladda gaadiidka dadweynaha London si ay u noqoto xaaladaha ka horreeya Luulyo 19-keeda.
Maaskaro xiran Tube -ka ayaa laga yaabaa in sharcigu mar kale dalbado mar dhow.
Maaskaro qasab ah oo keliya ayaa dadka ka dhigi doonta inay dareemaan ammaan mar kale gaadiidka dadweynaha.
Xirashada maaskaro ee qasabka ah ee England ayaa la tuuray 19-kii Luulyo.
Duqa magaalada London Sadiq Khan wuxuu ku boorrinayaa soo laabashada maaskaro qasab ah oo xiran marada Tube London, iyagoo doonaya inay ka dhigaan xeer-hoosaad, sidaas darteedna u suurta-gelinaya Booliiska Gaadiidka Ingiriiska inay meel-mariyaan oo ciqaab go'an ku soo rogaan kuwa raacaya tareennada waji-xidhka la’aan.
Duqa magaalada London Sadiq Khan
"Waxaan isku dayeynaa inaan u ololeyno Dowladda si ay noogu oggolaato inaan keenno sharci-dejin, sidaa darteed waxay noqon doontaa sharciga mar kale, sidaa darteed waxaan soo saari karnaa ogeysiisyo ciqaabeed oo go'an waxaanan u adeegsan karnaa adeegga booliiska iyo BTP si aan u dhaqan-galno tan," ayuu yiri Khan , isagoo raaciyay in maaskaro qasab ah oo keliya ay dadka ka dhigi doonto inay dareemaan ammaan mar kale gaadiidka dadweynaha.
In mar kale la sameeyo qasab xidhashada maaskaro waxay dadka ka dhigaysaa inay dareemaan ammaan waxayna ku dhiirri-gelinayaan inay adeegsadaan Tube-ka, ayuu yiri duqa magaalada.
Xirashada maaskaro ee qasabka ah ee England ayaa la tuuray 19-kii July, inkasta oo Khan uu si joogto ah uga soo horjeeday tallaabadaas. Kahor 'Maalinta Xorriyadda', oo soo afjartay xidhitaanka maaskaro ee qasabka ah, wuxuu ka codsaday Gaadiidka London (TfL) inay u dhaqan geliso sidii "xaalad qaadis," taasoo ka dhigaysa shaqaalaha TfL inay awoodaan inay weydiistaan ​​rakaabka aan u hoggaansamin inay ka baxaan baska ama tareenka.
Haddii la hirgeliyo, isbeddelada uu soo jeediyay Duqa Magaalada Khan ayaa si wax ku ool ah ugu celin doonta xaaladda gaadiidka dadweynaha London si loo gaaro xaaladaha ka horreeya Luulyo 19-keeda. In kasta oo la fududeeyay xayiraadaha, qiyaastii saddex-meelood laba meel dadka waaweyn ee UK ayaa wali qorsheynaya inay sii wataan xirashada maaskaro, sida ku cad tirakoobka rasmiga ah. Tirada dadka ku labisan maaskaro gaadiidka dadweynaha ayaa sidoo kale weli ah mid aad u sareysa, iyadoo ku dhawaad ​​85% rakaabka Tube, baska, iyo tareenka ay sidaas sii wadaan.